FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AN'NY AEREDALE TERRIER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika an'ny Aeredale Terrier
Cooper the Airedale Terrier amin'ny 2 taona
Lisitry ny alika mifangaro teritery Airedale Terrier
Ny Airedale Terrier no lehibe indrindra amin'ireo terriers ary mijoro toradroa amin'ny fisehony. Mitovy halava amin'ny vava ny karan-doha, miaraka amina fijanonana kely izay sarotra jerena. Lava sy fisaka ny loha. Mainty ny orona. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny ambaratonga, mitovy amin'ny vice na manaikitra ny hety. Mainty ny lokon'ny maso. Ny sofina miendrika V dia mivalona kely amin'ny sisin'ny loha ary mandroso. Lalina ny tratra. Ny topline any aoriana dia avo lenta. Ny tongotra eo anoloana dia mahitsy tsara. Ny rambony dia apetraka ambony ao an-damosina. Ny palitao roa sosona dia manana palitao ivelany matevina sy matevina ary wiry miaraka amin'ny akanjo lava malemy. Ny loko amin'ny palitao dia misy ny tan sy ny mainty ary ny volontany. Ny loha sy ny sofina dia tokony ho mena, ary ny sofina kosa dia somary matroka kokoa noho ny volony. Ny tongotra, feny, kiho ary ny tapany ambanin'ny vatana sy ny tratra dia mena ihany koa, indraindray mihazakazaka mankamin'ny soroka. Amin'ny andalana sasany dia misy fipoahana fotsy kely eo amin'ny tratrany. Ny lamosin'ny alika, ny sisiny ary ny tapany ambony amin'ny vatana dia tokony ho loko mainty na mainty.
Ny Airedale Terrier dia mazàna hanao tsara amin'ny ankizy raha sendra tratry ny fotoana fohy izy ireo ary -piaraha-monina , na izany aza dia mety milay loatra amin'ny ankizy kely izy ireo. Be herim-po sy miaro. Sariaka amin'ny olon-tsy fantatra. Manan-tsaina, mahafinaritra ary mahatoky. Mahatsapa sy mamaly, izy dia mety ho lasa mpanazatra voaofana amin'ny ambaratonga avo. Airedale Terriers dia be fitiavana sy milalao rehefa alika kely. Airedales dia ho faly hampifaly anao raha tsy misy zavatra manery bebe kokoa ny tontolo iainana (chipmunk, alika hafa, sakafo). Ny Airedale dia mahatoky tokoa, fa amin'ny maha mpihaza mazoto anao dia tokony ho mpanazatra ace ianao hahatonga azy hiala amin'ny chipmunk na dia steak manta aza! Mavitrika izy ireo ary mety ho somary mena volo raha tsy mandray ampy isan'andro fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana . Ampiofano ity alika ity tsy mitsambikina amin'ny olombelona . Ny Airedale Terrier dia mila fiofanana tsara momba ny fankatoavana sy tompona mahalala ny fomba hahatongavany ' Alika ambony 'The Airedale Terrier dia mety manana fanamby manjaka amin'ireo olona ao amin'ny fianakaviana hitany fa manoa. Mety hiteraka finiavana sy tsy fankatoavana izany. Tsy izany sarotra ampiofanina , saingy tsy mamaly ny fomba fampiofanana henjana sy mahery setra izy ireo. Ny Airedale Terrier dia manan-tsaina ampy hahafantarana haingana ny zavatra takiana aminy, fa raha angatahinao hatrany hanao zavatra mitovy hatrany dia mety handa. Miezaha manome karazany vitsivitsy amin'ny fampiofanana azy, ataovy sarotra ny fampiharana. Mila mpitantana milamina izy ireo nefa hentitra sy matoky tena ary tsy miovaova. Miaraka amin'ny mpihazakazaka ankavanana, ny Airedale Terrier dia afaka manao tsara amin'ny fanatanjahan-tena alika isan-karazany ao anatin'izany ny fitsapana alika mpiaro. Ity karazana ity dia matetika mifanerasera amin'ny saka an-trano sy ny biby hafa, fa indraindray kosa manandrana manjaka alika hafa izy ireo. Miankina amin'ny làlan'ny ny olona manodidina ny alika dia mitsabo azy , ny fiofanan'izy ireo ary ny alika tsirairay.
Haavony: Lehilahy 22 - 24 santimetatra (56 - 61 cm) Vehivavy 22 - 23 santimetatra (56 - 58 cm)
Milanja: Lehilahy 50 - 65 pounds (23 - 29 kg) Vehivavy 40 - 45 pounds (18 - 20 kg)
Karazan-java-matanjaka tena mafy, na dia mety mijaly amin'ny mason'ny maso, ny lalan-dra amin'ny hip sy ny aretin-koditra ny sasany. Raha manana hoditra maina ny Airedale Terrier anao, dia tokony homena refy asidra omega-6 / omega-3 voatanisa amin'ny sakafo izy.
atiny matanjaka atiny alemana shorthaired
Ny Airedale Terrier dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Mavitrika be izy ireo ao an-trano ary hanao izay tsara indrindra farafahakeliny tokotany sahaza.
Airedales dia nobeazina tamina asa mavitrika ary noho izany mila fanatanjahan-tena be dia be. Mila entina izy ireo mandeha lava isan'andro . Ny ankamaroan'izy ireo dia tia milalao baolina, milomano na mandray zavatra ary rehefa mihalehibe dia mihazakazaka miaraka amin'ny bisikileta. Raha tsy misy ny fiheverana sy fampihetseham-batana dia hilentika sy ho leo ny Airedale Terrier ary matetika dia hahita olana izy. Ny fepetra takiana amin'ny fanatanjahan-tena dia mety hidina somary latsaka aorian'ny roa taona voalohany (toy ny alika maro) fa ny roa taona voalohany miaraka amin'i Airedale dia tena mavesatra amin'ny olombelona. Avy eo manomboka mihombo izy ireo.
Ankizy 9 eo ho eo
Airedales manana palitao lava volo fohy sy volo. Tokony heverina indroa isan-taona ny volo, fa ho an'ny alika haseho kosa dia ilaina ny fikolokoloana mafimafy kokoa. Hetezo eo anelanelan'ny lamban'ny tongotra ny volo be loatra raha ilaina izany. Raha mitazona ny palitao ianao, dia handena kely ny volony izany, na izany aza, raha tsy esorinao ny palitao, dia mety hahita fehim-bolo manodidina ny baoritrao ianao, na dia mihintsana sy mihosotra saika isan'andro aza. Tena mila fikarakarana kely izy ireo. Mipetaka amin'ny palitao sy volombava ny Burrs. Tokony hosasana isan'andro ny volombava noho ny sakafo sisa tavela. Airedale Terriers dia mety tsara ho an'ireo marary allergy sasany.
Ny Airedales voalohany dia toa hafa tanteraka amin'ny an'ny Airedales ankehitriny. Izy ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe Waterside sy Bingley Terriers, nateraka hatramin'ny ankehitriny lany tamingana terera karazana mainty sy mainty. Niampita niaraka tamin'ny Otterhound hahatonga azy ho mpilomano tsaratsara kokoa. Voalaza koa fa manana Manchester Terrier amin'ny rany. Izy ireo dia novolavolaina tokony ho zato taona lasa izay tao amin'ny tanin'i York avy amin'ny Working Terrier taloha. Ny Airedale dia matetika antsoina hoe 'The King of Terriers.' Ny karazany dia nampiasaina ho mpihaza vermin ary nomena anarana ho an'ny Valley of the Aire any Angletera, izay feno lalao kely. Ho fanampin'ny anjara asany amin'ny maha mpihaza lalao kely azy, ny Airedale dia nampiasaina hihaza lalao lehibe any India, Afrika ary Kanada. Ny karazany dia nampiasaina ho alika polisy sy mpiambina tamin'ny ady tamin'ny Ady lehibe II ihany koa. Ankehitriny ny Airedale dia alika mpiara-miasa indrindra, saingy mbola misy tsipika miasa any. Ny talenta sasany an'ny Airedale dia ny fiambenana, mpiambina, fihazana, fifehezana ny mpikiky, ny fanarahan-dia, ny asa miaramila, ny asan'ny polisy ary ny fankatoavana amin'ny fifaninanana.
Jereo ohatra hafa momba ny Airedale Terrier
Sary Airedale Terrier 1
Sary Airedale Terrier 2
Sary Airedale Terrier 3
Airedale Terrier: sary an-tsokosoko voaangona
6 volana olo-masina Bernard
Jack Russell Chihuahua hifangaro mainty sy fotsy
lanja alika any Kaokazy rosiana
fampahalalana momba ny mix mix basset hound
tapany sisintany collie mpiandry aostraliana antsasaky